Ny Galaxy Note 7 dia hamidy indray any Etazonia amin'ny 21 septambra | Vaovao momba ny gadget
Ny olana lehibe izay Galaxy Note 7 izay nahatonga azy hitsoka noho ny tsy fahombiazan'ny bateria, toa voavaha izy ireo ary tao anatin'ny ora farany dia nanambara i Samsung fa ny terminal hamidy indray any Etazonia amin'ny 21 septambra. Amin'io andro io ihany, ny Note 7 vaovao dia hanomboka hatolotra an'ireo mpampiasa izay nividy ny sainam-piaramanidina vaovao an'ny orinasa Koreana Tatsimo, voavaha tanteraka ny olana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy daty ny famerenan'ny Galaxy Note 7 any amin'ireo magazay Espaniôla sy any amin'ny firenena maro hafa, saingy antenaina fa hanambara izany amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny andro vitsivitsy i Samsung.
Any Etazonia, ireo mpampiasa izay tsy maintsy nanatitra ny fitaovana vaovaony vao mahazo vaovao ho takalony, miaraka amin'ny olan'ny bateria dia voavaha tanteraka, dia hahazo ny Galaxy Note 7 vaovao talohan'izay nandrasana. Any amin'ny firenen-kafa dia mila miandry isika mba hahitana ny fandrosoan'ny fizotrany, fa toa farany tsy tokony hihoatra noho ny farany ny volana namboarin'i Samsung ho fampahalalana.
Ny olana amin'ny Galaxy Note 7 dia toa efa hifarana, na dia manana lalana sarotra alohan'io aza i Samsung, miaraka amina fitaovana finday iray izay nanao fanombohana tena ratsy teo amin'ny tsena ary efa namoy an'arivony tapitrisa tapitrisa tamin'izy ireo . Ho fanampin'izay, mbola ho hita izao raha mitazona ny isan'ny varotra ity smartphone vaovao ity satria azo antoka fa maro ireo mpampiasa no tsy hatoky fa voavaha tanteraka ny olana rehetra.
Hividy Galaxy Note 7 ve ianao na eo aza ny olana rehetra nanjo azy tamin'ny andro voalohany teny an-tsena?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Galaxy Note 7 dia hamidy indray any Etazonia amin'ny 21 septambra
Ny Samsung Gear 360 Pro dia afaka miaraka amin'ny Samsung Galaxy S8 vaovao